:: My Little World ::: ပုရစ်ကြော်
Posted by Nay Nay Naing at 11/27/2008 11:42:00 AM
ငယ်ငယ်ကတော့စားဖူးတယ်။ ကြီးတော့ မစားတာကြာတော့ အရသာလည်းမေ့...
ဒါနဲ့ အင်တာဗျူးလိုက်တဲ့ ချစ်သူဆိုတာ ဘူရဲ...:P:P:P
Thursday, November 27, 2008 12:16:00 PM
သိဘူး။ သရေ ကျသွားတာပဲ သိတယ်။
Thursday, November 27, 2008 12:37:00 PM
ပုရစ်ကြော်ကို ပင်နီဆူလာမှာတော့ ဟိုတစ်ပတ်က တွေ့ခဲ့တယ်။ အကောင်တော့သေးတယ်ဗျ။ ဖားကြော်တို့၊ လယ်ကြွက်ကြော်တို့ကော စားဖူးလားအမ။ လယ်ကြွက်က ငရုတ်သီးစပ်စပ်နဲ့ ကြွပ်နေအောင်ကြော်ထားရင် အရမ်းကောင်းတယ်။ ဖားလည်း တူတူပါပဲ။ ဒီက ဖားစိမ်းစိမ်းတွေတော့ ဘယ်တော့မှ မစားဘူး။
Thursday, November 27, 2008 1:05:00 PM
Thursday, November 27, 2008 1:21:00 PM
sin dan lar >> ဒီလိုအစားအသောက်တွေက စားကျင့်ရှိတဲ့ လူတွေမှာ စားချင်စိတ်ပေါ်မယ် ထင်တယ်.. တချို့ ကိစ္စတွေက ကလေးတွေ မသိတာကောင်းတယ်.. :-B
ဟန်လင်းထွန်း >> ဘယ်နိုင်ငံကလည်းမသိဘူး.. စလုံးမှာဆို မြန်မာဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်လို့ ရတယ် ပြောတယ်.. တခြားနိုင်ငံကဆို ယိုးဒယားဆိုင်တွေမှာ သွားမေးကြည့်။
Taungoo >> ဖားကြော် ကို ဒီရောက်မှ စားဖူးတာ။ ကြိုက်တယ်။ ဟင်းချက်တာတော့ မကြိုက်ဘူး။ လယ်ကြွယ်ကြော် စားချင်တယ်။ အမေက ပြောဖူးတယ်။ လယ်ကြွက်ကြော်က စားလို့ ကောင်းတယ်တဲ့။ နောက်တခါ အိမ်ပြန်ရင် ဆောင်းတွင်းပြန်မယ် စိတ်ကူးတယ်။ ဒါမှ ခရီးထွက်ပြီး နယ်က အမျိုးတွေရှိတဲ့ နေရာသွားမှ မစားဖူးတာတွေ စားလ်ို့ ရမှာ. ရန်ကုန်မှာဆို အမေက ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားတွေ စားခိုင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။
မမွန် >> မစားရဲတာ သိတယ်။ ဟိုအကောင်နဲ့ တူတယ်နော် :D
Oh God! I can't eat it any more I think. Yes I tried long ago.
Thursday, November 27, 2008 11:24:00 PM
ပုရစ်ကြော်ကြိုက်တယ်။ အရင်ကဖရေဇာမှာနို့ဆီဗူးနဲ့ ရောင်းတယ်။ စင်ကာပူထိတောင်ဈေးကွက်က ပြန့်လာပြီကိုး။
Peninsula က မြန်မာဆိုင်တွေမှာ ရောင်းတာတွေ့ တယ် ပြောကြတာပဲ။ ကိုယ်တိုင်တော့ မတွေ့ ဖူးဘူး။ မြန်မာပြည်ကဆို ဒီကို ပစ္စည်းပို့ ရလွယ်သလို၊ လူကြုံတွေကလည်း များတော့ ကြိုက်တဲ့သူတွေက အသေအချာ အိမ်က မှာစားလို့ ရကြတယ်လေ..
သူ့မှာ ချစ်သူရှိတယ်လို့ ပြောချင်တာကိုး. နုစံနဲ့ တူလိုက်တာနော်. နုစံလည်း အရုပ်တွေ ကြိုက်တယ် ဆိုပြီး တီဗွီ အကြီးကြီးကို တို့တွေကိုပြတယ်။းP
Saturday, November 29, 2008 11:42:00 AM
တီဗီပဲပြပြ၊ ပုရစ်ပဲပြပြ..နောက်တစ်ခါဆို receiptပါ တွဲတင်ရမယ် ဒါပဲ။
Saturday, November 29, 2008 12:57:00 PM
ချစ်သူရှိတာ တော်တော်များများ သိကြပါတယ်။ ဒီဘလော့စရေးကတည်းက သူ့ အကြောင်း မကြာမကြာ ရေးခဲ့တာပဲလေ။ အခုမှ ထူးပြီး ထပ်ကြွားနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး အစ်မရဲ့။ နောက်ပြီး ဒီနေရာမှာ အခုလောက် မှန်မှန် ရေးဖြစ်နေတာဟာလည်း ချစ်သူရဲ့ တိုက်တွန်းအားပေးမှု့ ကြောင့်ပဲလေ။ အစ်မ မသိဘူးလား .. :">
receipt ထည့်မရေးပေးနိုင်တာကို ခွင့်လွတ်ပါနော်။ :P ဘယ်လိုချက်ရမယ်ဆိုတာ သိမှ မသိတာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်မှာ ၀ယ်လို့ ရတယ် ဆိုတဲ့ လိပ်စာလေးတွေ ထည့်ရေးပေးတယ်လေ။ ကျေနပ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ :D
အစ်မရေ ပုရစ်ကြော်က ဟိုအကောင်နဲ့မတူပါဘူး။ ဟိုအကောင်းက နံတယ်လေ။ အတောင်ပျံမဖြုတ်ထားရင် ဟိုအကောင်နဲ့ နဲနဲတယ်တယ်။ ပုရစ်က စားကောင်းပါတယ်ဗျ။ ဟိုအကောင်ကြီနဲ့တော့ မနှိုင်းပါနဲ့ဗျာ။ ဟီးး ပုရစ်ကြော် ကြိုက်ပေမယ့် ဟိုအကောင်တော့ ကြောက်တယ်။
Monday, December 01, 2008 10:39:00 PM
I feel pity to them... Seem they are fried in hot oil b4 they died... I think it's called hell... :(
Thursday, November 05, 2009 11:34:00 PM